အလုပ်ကြွေးများကို အမြန် ရှင်းထုတ်ရန် နည်းလမ်းများ – Gentleman Magazine
လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်လာရင် လုပ်ရမယ့်အလုပ်က လူအင်အားနဲ့မမျှတဲ့အခါ အလုပ်ကြွေးတွေ ပိလာပါတယ်။ တချို့အလုပ်တွေကို လက်ခံပြီး တချို့ အလုပ်အပ်တာတွေကို ငြင်းလွှတ်ရတာ ရင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်။ အဲဒိအခြေအနေမှာ ငွေဝင်ဖို့ မရှိပါဘူး။ ဖြေရှင်းလို့လဲ မရပါဘူး။
အဲ့ဒိလိုလုပ်ငန်းတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ သင့်ရဲ့ရှိစု မဲ့စု လူအင်အားလေးကို ဖြုန်းတီးသွားနိုင်တဲ့ ယိုပေါက်လေးတွေပါပဲ။ အဲဒိယိုပေါက်တွေကတော့ အရေးမကြီးတဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်နေရတဲ့ အလုပ်လေးတွေပါ။ အဲဒိယိုပေါက်တွေက တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေ လူအင်အားတွေ အာရုံစိုက်မှုတွေကို စားသုံးပစ်နေပါတယ်။
အဲဒိလို အကျိုးမရှိတဲ့ အလုပ်တွေက ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာ အမြစ်တွယ်လာတာနဲ့အမျှ သတိပြုမိဖို့ ခက်လာပါတယ်။ ဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့ကတော့ ပိုခက်ပေါ့။ အဲဒါလေးတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လုပ်အားကို တိတ်တိတ်လေး စားသုံးနေပါတယ်။ အဲဒိယိုပေါက်လေးတွေမှာ တွေ့ရအများဆုံးကတော့ အလုပ်ကြွေးတွေပါပဲ။
အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်နောက်တစ်ခုပေါ်လာတဲ့အခါမှာ လုပ်လက်စအလုပ်ကို ဘေးဖယ်ထားမိတတ်ကြပါတယ်။ လောလောလောလောနဲ့ အစည်းအဝေးထိုင်တယ်။ မြန်မြန်ပြီးအောင် ဖြစ်သလို လုပ်မိတတ်တယ်။ စိတ်ထဲက မပါတော့ဘူး။ နောက်ဆုံးကျ ကိုယ့်ဘာသာ အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တာပဲလေ လို့ နှစ်သိမ့်ကြပါလေရော။
ဒါပေမယ့် အဲဒိလုပ်လက်စ မပြီးသေးတာတွေရဲ့ ချိန်းထားတဲ့ရက်တွေ၊ ပြီးမယ်လို့ အာမခံထားတာတွေ ကြောင့် အရေးကြီးတာကို ချပြီး ရက်ချိန်းနီးတာကို လောရပြန်ပါရော။ အစည်းအဝေးတွေမှာ ရေရေရာရာ ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိပဲ ပြီးသွားတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲတွေက အဖြေရှာမရ။ ပြသနာတွေက မရှင်းသေးဘူး။ အဲဒိအလုပ်ကြွေးယိုပေါက်ဟာ နောက်ဆုံးမှာ စိတ်ပင်ပန်းမှု သဘောကွဲလွဲမှု တွေနဲ့ တန်ခိုးပြပါတော့တယ်။
သတင်းကောင်းကတော့ အဲဒိယိုပေါက်ကို ရှာဖွေပြီးပိတ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါ အချက်များကို လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။
၁. အရေးကြီးတာကို အာရုံစိုက်ပြီး သေသေချာချာလုပ်ပါ
အချိန်နဲ့ လုပ်အားကို လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချပါ။ အစည်းအဝေးတွေ မြန်မြန်လုပ်၊ စကားတိုတိုလေးတွေပြောတာထက်စာရင်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်ထွက်ပေါ်လာဖို့ အချိန်ယူပြီး စည်းဝေးပါ။
၂. နောက်တစ်ဆင့်မတက်ခင် သေသေချာချာလုပ်ပါ
အလုပ်မပြီးသေးဘူးဆိုရင် အလုပ်ရဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ကို အချိန်တစ်ခုမှာ ပြီးအောင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ ပြီးအောင်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် အဲဒိနောက်တစ်ဆင့်ကို ပိုပြီးလွယ်ကူအောင် စီစဉ်ပါ။
၃. အောင်မြင်မှုတိုင်းကို အားသာချက်အဖြစ် အသုံးချပါ
အကြောင်းအရာ တစ်မျိုးတည်းကို ထပ်ခါထပ်ခါပြောတာ၊ မပြီးသေးတဲ့အလုပ်ကို ပြန်လုပ်ရတာတွေလောက် အလုပ်အရှိန်ပျက်စေတာ မရှိပါဘူး။ အဲလို အရှိန်မပျက်အောင် သင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်အောင်မြင်မှုတွေ၊ ဖြေရှင်းပြီးတဲ့ ပြသနာတွေ၊ ရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေ ကိုအာရုံပြုပြီး ခွန်အားရယူပါ။
ကာလတို ဖြေရှင်းချက်တွေ၊ အမြန်ပြသနာရှင်းနည်းတွေထက်စာရင် အပေါ်က အချက်တွေကို အလုပ်မှန် နေရာမှန် လုပ်မိအောင် အသုံးချလိုက်ပါ။ နောက်တစ်ခေါက် ယိုပေါက်ကြုံရရင် အဲဒိအပေါက်ကို ပိတ်ပစ်ပြီး စီးပွားပျက်စေမယ့် အလုပ်ကြွေးတွေကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့။
လုပျငနျးတှေ အောငျမွငျလာရငျ လုပျရမယျ့အလုပျက လူအငျအားနဲ့မမြှတဲ့အခါ အလုပျကွှေးတှေ ပိလာပါတယျ။ တခြို့အလုပျတှကေို လကျခံပွီး တခြို့ အလုပျအပျတာတှကေို ငွငျးလှတျရတာ ရငျနာဖို့ကောငျးပါတယျ။ အဲဒိအခွအေနမှော ငှဝေငျဖို့ မရှိပါဘူး။ ဖွရှေငျးလို့လဲ မရပါဘူး။
အဲ့ဒိလိုလုပျငနျးတှမှောတှရေ့တတျတဲ့ မကောငျးတဲ့အရာတဈခုကတော့ သငျ့ရဲ့ရှိစု မဲ့စု လူအငျအားလေးကို ဖွုနျးတီးသှားနိုငျတဲ့ ယိုပေါကျလေးတှပေါပဲ။ အဲဒိယိုပေါကျတှကေတော့ အရေးမကွီးတဲ့ ထပျခါထပျခါလုပျနရေတဲ့ အလုပျလေးတှပေါ။ အဲဒိယိုပေါကျတှကေ တနျဖိုးရှိတဲ့ အခြိနျတှေ လူအငျအားတှေ အာရုံစိုကျမှုတှကေို စားသုံးပဈနပေါတယျ။
အဲဒိလို အကြိုးမရှိတဲ့ အလုပျတှကေ ကြှနျတျောတို့နစေ့ဉျဘဝမှာ အမွဈတှယျလာတာနဲ့အမြှ သတိပွုမိဖို့ ခကျလာပါတယျ။ ဖယျထုတျပဈဖို့ကတော့ ပိုခကျပေါ့။ အဲဒါလေးတှကေ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ တနျဖိုးရှိတဲ့ လုပျအားကို တိတျတိတျလေး စားသုံးနပေါတယျ။ အဲဒိယိုပေါကျလေးတှမှော တှရေ့အမြားဆုံးကတော့ အလုပျကွှေးတှပေါပဲ။
အရေးကွီးတဲ့ အလုပျနောကျတဈခုပျေါလာတဲ့အခါမှာ လုပျလကျစအလုပျကို ဘေးဖယျထားမိတတျကွပါတယျ။ လောလောလောလောနဲ့ အစညျးအဝေးထိုငျတယျ။ မွနျမွနျပွီးအောငျ ဖွဈသလို လုပျမိတတျတယျ။ စိတျထဲက မပါတော့ဘူး။ နောကျဆုံးကြ ကိုယျ့ဘာသာ အကောငျးဆုံးလုပျခဲ့တာပဲလေ လို့ နှဈသိမျ့ကွပါလရေော။
ဒါပမေယျ့ အဲဒိလုပျလကျစ မပွီးသေးတာတှရေဲ့ ခြိနျးထားတဲ့ရကျတှေ၊ ပွီးမယျလို့ အာမခံထားတာတှေ ကွောငျ့ အရေးကွီးတာကို ခပြွီး ရကျခြိနျးနီးတာကို လောရပွနျပါရော။ အစညျးအဝေးတှမှော ရရေရောရာ ဆုံးဖွတျခကျြမရှိပဲ ပွီးသှားတယျ။ ဆှေးနှေးပှဲတှကေ အဖွရှောမရ။ ပွသနာတှကေ မရှငျးသေးဘူး။ အဲဒိအလုပျကွှေးယိုပေါကျဟာ နောကျဆုံးမှာ စိတျပငျပနျးမှု သဘောကှဲလှဲမှု တှနေဲ့ တနျခိုးပွပါတော့တယျ။
သတငျးကောငျးကတော့ အဲဒိယိုပေါကျကို ရှာဖှပွေီးပိတျနိုငျပါတယျ။ အောကျပါ အခကျြမြားကို လိုကျလုပျကွညျ့ပါ။
၁. အရေးကွီးတာကို အာရုံစိုကျပွီး သသေခြောခြာလုပျပါ
အခြိနျနဲ့ လုပျအားကို လိုအပျနတေဲ့နရောတှမှော အကြိုးရှိရှိ အသုံးခပြါ။ အစညျးအဝေးတှေ မွနျမွနျလုပျ၊ စကားတိုတိုလေးတှပွေောတာထကျစာရငျ၊ ဆုံးဖွတျခကျြအမှနျထှကျပျေါလာဖို့ အခြိနျယူပွီး စညျးဝေးပါ။
၂. နောကျတဈဆငျ့မတကျခငျ သသေခြောခြာလုပျပါ
အလုပျမပွီးသေးဘူးဆိုရငျ အလုပျရဲ့ နောကျတဈဆငျ့ကို အခြိနျတဈခုမှာ ပွီးအောငျ ဆုံးဖွတျခကျြခပြါ။ ပွီးအောငျလုပျဖို့မဖွဈနိုငျဘူးဆိုရငျ အဲဒိနောကျတဈဆငျ့ကို ပိုပွီးလှယျကူအောငျ စီစဉျပါ။
၃. အောငျမွငျမှုတိုငျးကို အားသာခကျြအဖွဈ အသုံးခပြါ
အကွောငျးအရာ တဈမြိုးတညျးကို ထပျခါထပျခါပွောတာ၊ မပွီးသေးတဲ့အလုပျကို ပွနျလုပျရတာတှလေောကျ အလုပျအရှိနျပကျြစတော မရှိပါဘူး။ အဲလို အရှိနျမပကျြအောငျ သငျလုပျခဲ့တဲ့ အလုပျအောငျမွငျမှုတှေ၊ ဖွရှေငျးပွီးတဲ့ ပွသနာတှေ၊ ရရှိတဲ့ အကြိုးအမွတျတှေ ကိုအာရုံပွုပွီး ခှနျအားရယူပါ။
ကာလတို ဖွရှေငျးခကျြတှေ၊ အမွနျပွသနာရှငျးနညျးတှထေကျစာရငျ အပျေါက အခကျြတှကေို အလုပျမှနျ နရောမှနျ လုပျမိအောငျ အသုံးခလြိုကျပါ။ နောကျတဈခေါကျ ယိုပေါကျကွုံရရငျ အဲဒိအပေါကျကို ပိတျပဈပွီး စီးပှားပကျြစမေယျ့ အလုပျကွှေးတှကေို နှုတျဆကျလိုကျပါတော့။
Previous: အမျိုးသမီးများစွာကို ဆွဲဆောင်မှုရှိစေမည့် နည်းလမ်း (၉)သွယ်
Next: ဩဇာတိက္ကမ ရှိစေဖို့ အချက် ၇ ချက်